sagun khabar Apr 9, 2019 0
काठमाडौं । दक्षिण भारतीय चलचित्र उद्योगमा पनि बलिउड जस्तै चर्चित र कमाइ गर्ने कलाकारहरु छन् । उद्योगमा नाम चलेका सुपरस्टार मध्ये एक हुन् अल्लू अर्जुन । उनको फ्यान फलोङ बलिउड स्टार्स बराबर रहेको छ । अल्लू अर्जुन दक्षिण भारतीय चलचित्र…
काठमाडौं । १९ बर्ष पहिले रिलीज भएको चलचित्र 'धड्कन' आज पनि दर्शकहरु माझ प्रिय छ । बलिउड अभिनेता सुनील शेट्टी मुख्य भुमिका रहेको चलचित्रमा शिल्‍पा शेट्टी र अक्षय कुमार रहेका छन् । चलचित्रमा देव, अन्जली र रामको त्रिकोणात्मक प्रेम कथालाई…
मोहन बैद्य पनि युद्धको पक्षमा, ओली र प्रचण्डलाई यस्तो चेतावनी (भिडियो)
काठमाण्डौ । नेकपा (क्रान्तिकारी)का महासचिव मोहन वैद्य ’किरण’ले आवश्यक परे फेरि हतियार उठाउने उद्घोष गरेका छन् । पार्टी निकट देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा (देजमो) नेपालको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटन गर्दै उनले यस्तो उद्घोष गरेका हुन् ।…
निदाएपछि सपना देख्नु सामान्य कुरा हो । सबैले सपना देख्छन् वा स्मरण गर्छन् भन्ने चाँहि हुँदैन । मानिसले फरक फरक प्रकृतिका सपना देख्ने गर्छन् । आफ्नो दैनिकी, काम, व्यस्तता, इच्छाका आधारमा सपनाहरु देखिने विभिन्न अनुसन्धानहरुले देखाएका छन् ।…
एजेन्सी । जहाजमा रक्सि नदिएको झोँकमा एक वकिल महिलालले क्रु मेम्बरलाई गाली गर्दै थुकेपछि उनलाई ६ महिनाको जेल सजाय सुनाइएको छ । गत नोबेम्बरमा एयर इन्डियामा भारतको मुम्बइबाट लण्डण्न गइरहेकी आयरलेण्डकी मानवाधिकार वकील ती महिलालाई युके अदालतले ६…
एजेन्सी । अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामाले केबल एउटै विषयलाई लिएर मात्र पत्नी मिसेलले आफूलाई छाडेर जान सक्ने बताएका छन् । जर्मनीको बर्लिनमा भएको एक सम्मेलनमा ३०० युवाहरुका अगाडि बोल्दै ओबामाले यस्तो भनेका हुन् । ओबामा जोडीलाई…
हामी कस्तो छौ ? हाम्रो रंग कस्तो छ ? हाम्रो अनुहारको बान्की मिलेको छ/छैन ? हामीले लगाएको लुगा सुहाएको छ कि छैन ?यी कुराहरुमा त हामीलाई चासो हुन्छ । हेक्का पनि हुन्छ । आफ्नो अनुहार, आफ्नो ठाँट, आफ्नो पहिरन हामीलाई थाहा हुन्छ । यसमा कुनै…
दिपकराज गिरी र रोहित अधिकारीले चलचित्र ‘छ माया छपक्कै’ निर्माण गर्ने
दिपकराज गिरी र रोहित अधिकारीको संयुक्त टिमले निर्माण गर्ने भनिएको चलचित्रको नाम फाइनल भएको छ । ‘वडा नम्बर ६’ देखि चलचित्र निर्माणमा सक्रिय आमा सरस्वती मुभिजले यसपटक पनि लक्की मानिएको ‘छ’ अक्षरलाई नै निरन्तरता दिएको छ । आउँदो दशैंमा…
डोटी – चट्याङ लागेर अछाममा एकजनाको ज्यान गएको छ भने १६ जना घाइते भएका छन् । सोमबार राती करिब ७ बजेतिर चट्याङ लागेर अछाममा एकजनाको ज्यान गएको अछामका प्रमुख तथा प्रहरी नायव उपरीक्षक जनकबहादुर शाहीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार चट्याङ…
कपिल शर्मा शोमा सिद्धूको ठाउँमा आएकी अर्चनाले सिद्धूले जति सुविधा नपाएपछि…
मुम्बई। कपिल शर्मा शोको नयाँ एपिसोडमा जोन अब्राहम मौनी रोय आफ्नो फिल्म रोमियो, अकबर र वाल्टरको प्रोमोशनका लागि पुगेका थिए । यो एपिसोडमा नवजोत सिंह सिद्धूको ठाउँमा आएकी अर्चना पूरन सिंहले इशारा–इशारामा कम पारिश्रमिक पाएको पीडा व्यक्त गरिन्।…